Ọnọdụ ire ere - Zụta n'ịntanetị - Dafne Italian Design
Home Ọnọdụ ahịa
Site na NUMBER GREEN
Ị nwere ike ịnye site na ekwentị n'ekwughị oku!
Hụ ihe ndị a na-eme na Linne Ịtali. Ị nwere ike ịnye ihe ịchọrọ mmasị n'aka ndị ọrụ anyị ozugbo!
Ndị ọkachamara anyị dị gị mma maka ndụmọdụ ma ọ bụ nkwupụta maka ịzụrụ ihe na nhazi ngwaahịa.
Kpọọ nọmba 800.66.25.83 n'efu ahụ ozugbo. Ọrụ teleshopping dị 7 ụbọchị na 7 na-aga n'ihu site na Monday ruo Saturday site na 9.00 ruo 20.00.
ỤLỌ A NA-AKA NTỊ ỤLỌ
Ọnọdụ ndị a na-esonụ nke irerịrịrị na-akwado ndokwa maka ire ere ngwaahịa, dịka Iwu Nhazi Iwu 6 September 2005 n. 206, nke a na-akpọ ya "Usoro Ndị Ahịa", maka ịzụta ngwaahịa na ọrụ dị anya site na netwọk kọmputa na weebụsaịtị "www.dafnedesign.com"Nakwa, maka nchebe nke nzuzo, ndokwa nke Iwu Iwu 30 June 2003 n. 196.
Ndokwa ndị metụtara Usoro Ndị Ahịa na-emetụta naanị ndị na-azụta ihe ndị na-azụ ahịa ndị na-azụghị ahịa ọ bụla, azụmahịa, ọrụ ma ọ bụ ọrụ ọkachamara.
Ihe nke nkwekọrịta ahụ
A na-egosipụta ngwaahịa ndị ahụ na ire ere na saịtị ahụ, ọrụ ndị ahụ gụnyere ịkwaga ngwaahịa na adreesị nke onye ahịa ahụ họpụtara, ọ dịghị mgbakọ. A ga-enye ihe ọ bụla na teknụzụ data na teknụzụ.
A na-agwa ndị ahịa niile bi na Europe na ahịa ahịa.
Ọ bụrụ na ngwaahịa / s ga-ezigara ná mba ndị ọzọ na EEC, tupu ịzụrụ, ị ga-achọrịrị rịọ maka enyemaka na mbupu maka: info@dafnedesign.com
Ọrụ nke onye zụrụ ya
Onye zụrụ ya, site n'izipụ nkwenye nke ịzụta ya ka ọ bụrụ nke na-eji aka ya ana-eme ihe n'ekwe ntị, na-ekwuputa na ọ nyochaala nke ọma ma nakweere ọnọdụ izugbe ndị a, na-eme onwe ya ka ọ debe ha na mmekọrịta ya na onye na-ere ya. Onye ahịa ahụ kwetara ma kwenye, ozugbo a zụchara usoro ịzụta ntanetịime, iji bipụta ma debe ọnọdụ izugbe ndị a iji mezuo ọnọdụ ahụ dị na nka. 53 nke Iwu Iwu ahụ n. 206 / 2005
1) Nkwado ngwaahịa
The ngwaahịa rere ga-esoriri na-eru echiche site purchaser na / ma ọ bụ ozi dị na website, ewere n'ime akaụntụ na nke eke ngwaahịa (osisi, akpụkpọ anụ, marble, wdg) nta dị iche iche na-anabata ma ọ bụ na agba karịa atụ dystonias , anyị ga-eburu n'uche na agba nke ihe oyiyi ahụ nwere ike ịdị na-agbanwe dabere na ihuenyo na ụdị mkpebi nke nyochaa nke nwere onye na-azụ ihe.
2) Ihe osise
N'ihe banyere ihe eji emepụta nke a na-eji akwa, a ga-aghọta ihe ọ bụla na-atụgharị anya dịka nsụgharị nkà nke ọrụ ahụ, ya mere enwere ụdị ihe nkwekọrịta dịka ihe atụ. Kwesịrị imezi ihe ndị ahụ maka mmechi n'azụ nkwurịta okwu / nchọpụta ha, onye ahụ zụtara ya ga-agwa ya ozugbo. Onye na-azụ ego enweghị ike ikwu ọrụ ọ bụla na ikpe ahụ nke o nyere usoro na-ezighị ezi ma ọ bụ na ọ dịghị ekwupụta mgbanwe ahụ.
E gosipụtara ngwaahịa ahụ ("atụmanya anya") mgbe a na-ezigara ozi ahụ n'ekwentị. N'ọnọdụ ụfọdụ, gụnyere ngwongwo ka a ga-atụle, a ga-egosi oge ezipụ anya. Oge ọ bụla, onye zụrụ nwere ike ịnweta ozi gbasara ọganihu nke nkwekọrịta ahụ site na ịkpọtụrụ nọmba ntinyeghị aka 800662583 ma ọ bụ ide ederede ozi-e. info@dafnedesign.com.
Ngwa ahịa enyere n'iwu ka anyị na-ebuga nọmba okporo ụzọ onye na-azụ ahịa gosipụtara n'usoro ahụ.
Gbọ njem bụ n'efu na Italytali, a na-ebufe mbugharị n'okporo ámá mgbe niile.
Gwọ maka mbughari ga-eduga ala ma mgbakọ ga - eme ka ịkwụ ụgwọ ma dezie ya mgbe ọ bụla.
4) Ụgwọ ego
Enwere ọnụ ahịa ọzọ kwa ụbọchị nke 5 € (maka usoro nke ọ bụla) Ọ bụrụ na n'ime ụbọchị 10 site na ụbọchị nnyefe edoziri ma ọ bụ site na oge atọrọ ka edobere na usoro ịzụta, onye ahịa anaghị ewepụta onwe ya iji nata ma ọ bụ chịkọta ngwongwo. Thelọ ọrụ ahụ nwere ikike ịkagbu nkwekọrịta ahụ na ijigide ngwaahịa ekwuputaghị ya na ego ole a kwụrụ maka otu ihe ahụ.
Onye na-ere ere na onye na-azụ ihe abụghị ihe kpatara oge ịkwụsị, ọ bụrụ na nke a bụ n'ihi ike majeure ma ọ bụ ọnọdụ ọghọm.
6) Njehie doro anya
Ọ bụ ọrụ nke onye na-azụ ihe iji lelee ihe ndị e nwetara n'oge a na-enyefe ya nakwa na enweghi ụbụrụ doro anya (dịka scratches / stains). Akwukwo nke mmezi puru iche nke a puru ime site na telefon nye 800662583 n'ime ubochi onu ahia asa. Onye na-azụ ihe aghaghị izere ịbanye kpọmkwem ma ọ bụ site na ndị ọzọ maka iwepụ nsogbu ọ bụla a hụrụ. Naghị nke a, ụlọ ọrụ agaghị akwụghachi ụgwọ akwụ ụgwọ.
7) Akwụkwọ ikike
Iji kwadoro isiokwu ndị a ugbu a 128-135 nke Usoro Ndị Ahịa. The ebighị nke nkwa na-egosi, a ga-anabata, na ngosi nke sales nnata na / ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa maka zuo na ule nke ngwaahịa anomalies amara gị ọkwa site purchaser site pesonel họpụtara na-ere ere. The ntụpọ n'ihi nkịtị eyi na dọkatụrụ adọka nke iji, n'ụzọ, ma ọ bụ site na ihe mberede mere site na mpụga mmewere ma ọ bụ ọzọ site a mgbanwe abughi tụrụ anya ma ọ bụ ikike site na-ere ere, na-ekwe na nke a nkwa.
A na-ere ngwaahịa ndị a na-adabere na ọnụego ahụ e bipụtara na weebụsaịtị ma ọ bụ site na atụmatụ ahụ n'oge a bịanyere aka n'akwụkwọ ahụ.
9) Ịkwụ Ụgwọ
Ụgwọ nke ihe onwunwe ahụ bụ n'ụzọ doro anya na njikọ yana nkwenye iwu. Enwere ike ime ya site na usoro ndị a:
Ego nkịtị, Nnyefe ego, PayPal, Kaadị akwụmụgwọ.
Anyị na-akpọ gị ka ị gụọ ya (tinye njikọ na ozi).
11) Ebe maka nkwukọrịta
Onye na-azụ ahịa ahọrọ ebe obibi ya na adreesị e gosiri maka nnyefe.
A ghaghị ime ka mgbanwe ọ bụla mee ngwa ngwa.
Onye na-azụ ihe nwere ikike ịkwụsị nkwekọrịta ahụ, n'enweghị ụgwọ ọ bụla na-enweghị ịkọwa ihe kpatara ya, site na nkwupụta doro anya na ọchọrọ ịhapụ ọrụ nkwekọrịta n'ime ụbọchị 14 maka ịnyefe ngwaahịa ahụ n'adreesị:
Srls Nkwado - Via Fausto Coppi 18 / B - 65015 Montesilvano (PE). Enwere ike iziga nkwupụta site na akwụkwọ ozi e debara aha ma ọ bụ site na e-mail info@dafnedesign.com.
Enwere ike ịchụpụ ya, dịka aka ya. 59, leta c) nke Usoro Ndị Ahịa, n'ihe gbasara ngwaahịa ndị a tụrụ aro dịka mkpa ndị ahịa (dịka ụlọ ụlọ ịwụ ahụ, akwa, ebe a kụrụ nke ọma, mgbidi dị ndụ, enweghị ọkwa, wdg) ma ọ bụ na ngwaahịa dị naanị iji.
Onye na-azụ ihe nwere ike ịme ikike ịdọrọ ya n'ụzọ dịka akọwapụtara n'elu, ma ọ bụrụ na enyere ya akwụkwọ ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa metụtara ịzụta. Onye ahịa ahụ na-akwụ ụgwọ maka ịkwụghachi ngwaahịa ndị a na-aghaghị ịnata n'ọnọdụ nkịtị nke nchekwa.
Onye na-ere ere ga-aga n'ihu na nloghachi nke ụgwọ akwụ ụgwọ ozugbo a natachara ego ma nyochaa ya.
Nkwụghachi azụ nke onye na-ere ahịa mgbe ịlaghachiri ngwaahịa ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịme ma ọ bụrụ na akwụmụgwọ akụ.
Ugboro na oge njem
Mbupu ego na Europe na-enwere n'efu na ngwaahịa niile mgbe ụfọdụ dịgasị iche dabere na ngwaahịa na nnweta. Maka mba ndị na-abụghị mba EU, ha ga-atụle ya dabara na ngwaahịa na usoro.